Kedu otu esi ahọpụta nke na-emeri mkpụrụ okwu niche maka Amazon?
Ihe a bụ na enwere ọtụtụ niche Amazon - na ha niile dị gburugburu anyị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ezigbo uru n'ebe ahụ, ị ​​ga-agba mbọ iji nweta nchọpụta mkpokọta dị omimi, dịka nkwekọrịta niche ọ bụla a chọrọ iji chọpụta naanị mkpụrụedemede kachasị elu maka Amazon. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mara otu esi achọta ma eleghị anya ihe kachasị dị oké ọnụ ahịa na ọlaedo ndị a hụrụ n'ebe ahụ. Rịba ama, na iji jide n'aka na isiokwu gị dị elu nwere ike imeri, ọ ga-adị mkpa ka ị lekwasị anya na ndị niche ndị a na-ekwenye ekwenye na ngwaahịa ndị a pụrụ ịkọwa n'ụzọ ziri ezi dị ka ndị zuru oke. Cheta, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe mmalite nke ọ bụla, ọbụna njem ịzụ ahịa ọ bụla zuru oke, iji hụ onwe gị n'etiti azụmahịa ndị na-eduga n'ọdụ ụgbọ mmiri Amazon na-aga nke ọma.
Gịnị na-eme ka Niche Keywords Niche maka Amazon?
Nke a bụ naanị onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma eleghị anya ihe ọ bụla nke na - eweta gị ego nwere ike ịkpọ ya uru, nri? Site na Amazon, na nkọwa doro anya na nke dị mfe ka a ghaghị imelite naanị otu ọnọdụ - ịchọta niche na-akwụ ụgwọ na Amazon pụtara na a na-atụ anya ịme òkè ọdụm nke uru zuru ezu ị na-atụ anya site na ya - site n'oge kachasị dị mkpirikpi kwere omume - nokian 17570r14.
Ọ bụ na ị nwere ike ịba uru?
Kedu ka ị ga-esi ghọta na ị nọworị ebe kwesịrị ekwesị ka i wee nwee ike ịgagharị na mkparịta ụka gị kachasị mma maka Amazon? N'ezie, ị pụghị ịkpọọ na niche yiri uru, mgbe nchọta gị dabere, dịka ọmụmaatụ, naanị na iji kwenye nchịkọta ọchụchọ, nakwa dị ka ọnụahịa dị ukwuu nke ngwaahịa na-enye maka ihe karịrị otu puku puku. Nke a agaghị ezuru gị n'ihi na ị ga - enweta ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ n'ime oghere ndị a (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) ejikọtara gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịla oge gị na mgbalị gị. Ọ bụ ya. Ya mere, mgbe ị na-achọ ihe niche dị mma maka Amazon, ị ga - atụle ihe ndepụta ndị a na - esonụ. Ka nweta ohere kachasị elu nke ịchọta ezigbo uru maka okwu niche maka Amazon, jide n'aka na ị na - eme ya n'ebe kwesịrị ekwesị.
Ka o sina dị, ọrụ niche niile ga - eme ka ihe ndị na - esonụ sụgharịa:
Ntụle dị elu dị elu.
Na-emepe emepe na-arịwanye elu na-eto eto na-arị elu.
Ngwámpi Google ma ọ bụ obere ma ọ bụ obere.
Ngwaahịa dị n'ọtụtụ buru ibu.
Enwere ọtụtụ nyocha ndị ahịa maka ihe ọ bụla e nyere n'ebe ahụ.
N'ihe niile, mkpado mkpado elu zuru oke kwesịrị ịbụ ihe kacha mma.
Oge ndụ ogologo oge na-enweghị mmezi siri ike ma ọ bụ ọrụ ọrụ dị mkpa.
Ego zuru oke nke ndị na-azụ ihe na-enye gị ohere ohere maka ohere ọzọ.